नेपाली हिरोइन क्लासिकलमा कमजोर | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
नेपाली हिरोइन क्लासिकलमा कमजोर
Posted on मार्च 4, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी
नृत्य निर्देशन गर्न थालेको १८ वर्षको अवधिमा नृत्य निर्देशक गोविन्द राईले पाँच दर्जनभन्दा बढी फिल्मका गीतमा नृत्य निर्देशन गरिसकेका छन्　। यस हिसाबमा उनले पुरानादेखि नयाँ सबै नायिकालाई आफ्नो निर्देशनमा नचाइसकेका छन्　। अहिले चलेकामध्ये कुन नायिका नृत्यमा अब्बल छन्, कसलाई कस्तो नृत्य सुहाउँछ अनि कसले के कुरा सुधार्नुपर्छ ? हिरोइनलाई डान्स मास्टर गोविन्दको टिप्स्:
अहिले चलेका हिरोइनमध्ये ऋचा घिमिरे नृत्यमा अब्बल लाग्छ मलाई　। उनी गीतको भाव बुझेर नाच्छिन्　। बडी ल्याङ्वेज, टाइमिङ पनि राम्रो छ　। उनी क्लासिकल नृत्यमा भने कमजोर छिन्　। गर्न त खोज्छिन्, तर अधुरो रहन्छ　। गिरफ्तार फिल्मको थारू गीतमा उनी निकै राम्रो नाचेकी छिन्　। कालो वर्णकी भए पनि उनलाई ब्राइटभन्दा लाइट मेकअपमै सुहाउँछ　। कहिलेकाहीँ अल्छी गर्छिन्, यो बानी उनले हटाउनुपर्छ　। क्लासिकलमा भने उनले धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्छ　।
ऋचापछि उषा पौडेल डान्समा तगडा छिन्　। डान्सर भएकाले पनि होला उषा राम्रो नाच्छिन्　। क्लासिकलमा भने उनी पनि निकै कमजोर छिन्　। टाइमिङ पक्रिए पनि उनको स्टेप सफा देखिँदैन　। पि डान्स धेरै गर्न खोज्छिन्, तर लतपत देखिन्छ　। डान्स गर्दा जिब्रो निकाल्ने बानी थियो उनको, तर अहिले अलि सुधारेकी छिन्　। मुहार कलिलो देखिने भएकाले उनको हेयर स्टाइल र गेटअपमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ　। उनलाई मिनिस्कट र वान पिस डे्रस निकै सुहाउँछ　। मेरो के गति हुने हो फिल्मको गीतमा उनी पर्फेक्ट नाचेकी छिन्　। अचानक फिल्ममा भने ठोकठाक भएको छ　। हतारमा सिध्याउनुपर्ने भएकाले मैले सोचेजस्तो काम हुन सकेन　।
रेखा थापाको अदा राम्रो छ　। डान्सका स्टेप झयाप्पै टिपे पनि अलि सफा हुदैन　। सधै केही नयाँ गरुँ भन्ने अभ्यासमा हुन्छिन् उनी　। चञ्चल नृत्यमा उनी पर्फेक्ट छिन्　। उनको लट्का-झट्का राम्रो छ　। उनलाई छोटो लुगा नै बढी सुहाउँछ　। केही समययता उनको कम्मर अलि भद्दा भएको छ　। उनले मेन्टन गर्नुपर्छ　। फेसियल एक्सप्रेसन निकै राम्रो छ　। क्लासिकल नृत्यमा उनी पनि कमजोर छिन्　।कसम हजुरको फिल्मको चोरी-चोरी यो मन चोरी बोलको गीतमा उनले धेरै राम्रो डान्स गरेकी छिन्　। गंगाजलको गीतमा पनि उनले निकै अब्बल डान्स गरेकी छिन्　। नाच्दा धेरैजसो हात मुठ्ठी पार्ने बानी हटाउन जरुरी छ　।
रेखाभन्दा राम्रो डान्स गर्ने हिरोइनका रूपमा सञ्चिता लुइँटेललाई लिन्छु म　। उनका आँखा बोल्छन्　। गीतको भाव बुझेर नाच्छिन्　। तर, उनको डान्समा लचकता छैन　। कडकपन हाबी छ　। उनले बडी मेन्टन गर्न जरुरी छ　। साडी, कुर्था र गाउनमा नाच्दा सञ्चिता निकै राम्री देखिन्छिन्　। रोमान्टिक गीतमा उनी निकै खुलेर नृत्य गर्छिन्　।मैले काम गराएको माया त माया हो को तिमी दायाँ म बायाँ गीतमा उनी निकै राम्रो नाचेकी छिन्　। पहिलाभन्दा अचेल उनले डान्स सुधारेकी छिन्　। तर, उनले अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ　।
क्लासिक डान्समा उनी पनि कमजोर छिन्　।अर्की नायिका रेजिना उप्रेती पनि राम्रो नर्तकी हुन्　। उनको विशेषगरी मेकअपमा ध्यान दिनुपर्छ　। अनुहार सानो र ओठ पातलो भएका कारण उनको फेसियल एक्सप्रेसन ओझेलमा पर्छ　। त्यसकारण उनले डान्सका स्टेपमा मात्र होइन मेकअपमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ　। क्लासिकलमा उनी पनि कमजोर छिन्।
रेजिना पनि छोटा लुगा, स्विमिङ सुटमा खुलेको देखिन्छ　। वीरताको चिनोमा विराज भट्टसँग राम्रो नाचेकी छिन्　। उनलाई सादा साडी पनि सुहाउँछ　।विवश नामक डिजिटल फिल्ममा उनी बार डान्सर भएर नाचेकी छिन्　। तर, उनको काम गराइबाट म सन्तुष्ट भइन्　। काम पनि ठोकठाक भयो　। उनले पनि राम्रो गर्न सकिनन्　।
« पेरिस हिल्टनको विवाह ? नाच बारुली कम्मर भाँच »